ဒီရက်ပိုင်း ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့် တော့မယ် ဆိုလား. . . ဒါအရင် ဖတ် ကြည့်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ – GaMone Media
Homepage / Knowledge / ဒီရက်ပိုင်း ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့် တော့မယ် ဆိုလား. . . ဒါအရင် ဖတ် ကြည့်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ
ဒီရက်ပိုင်း ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့် တော့မယ် ဆိုလား. . . ဒါအရင် ဖတ် ကြည့်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ
ဒီရက်ပိုင်း ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တော့မယ် ဆိုလား
ကျမ ကလေးနှစ်ယောက် မိခင် လေးတန်း တက်မဲ့ သမီးလေး နဲ့ ၃ နှစ်ခွဲသားလေး တစ်ယောက် အမေပါ
ကိုယ့်သားသမီး ပညာရေးနောက်ကျစေလိုတဲ့ မိဘ ဘယ်မှာရှိလို့လဲ ကလေး တွေ တစ်နှစ် တစ်တန်း မှန်မှန်တက် ကျောင်းပညာရေးမနှောင့်နှေးစေချင်ဘူးပေါ့လေ
သို့ပေသည့် အကြောင်းရယ် ဖန်လာတော့လဲ ကျောင်းတွေ နားရပေမပေါ့ရှင် ခေတ်ဆိုးစနစ်ပျက်ကြီးကြားမှာ ပညာရေငတ်နေပေမဲ့ မသောက်သုံးသင့်မှန်းသိသိရဲ့နဲ့တော့ ကိုယ့်ခလေးကို အဆိပ်နုနုမသင့်ပါရစေနဲ့
ကျမ အမှန်တွေ ဝန်ခံ ပါရစေရှင် ကျမအသက် ၅နှစ်မှာ အခြေခံပညာ စသင်ခဲ့ရပါတယ် တနှစ်တစ်တန်း မှန်မှန်တက်ခဲ့ပြီး အသက် ၁၆နှစ်မှာ ဆယ်တန်းနဲ့ အသက် ၂၁နှစ်မှာ ရူပဗေဒဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့ရခဲ့သူပါ ကျမတို့ပညာရေး ဘယ်လဲ ဘာလဲ ရူပနဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့ပြီး ကျမလက် တွေ့တတ်ခဲ့တာက ဘယ်မလဲ ကျမ ခု စျေးရောင်းနေပါတယ်
ကျောင်းနေသက် ဆယ်စုနှစ် တခုကျော် မှာ ကျမတို့ ပညာရေးအခြေခံကရော ကျမတို့ဘဝကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ ပညာရေးပါလဲ ကျမ ခုထိ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံက ant = ပုရွတ်ဆိတ် အဆင့်ပါပဲ တကယ် တော်တဲ့တတ်တဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ အစိုးရကျောင်း များက ပေးခဲ့တဲ့ ပညာရေး ခုထိ ကျမလို လူမျိုးတွေ အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်
ဘယ်မလဲ ပေါက်မြောက်တဲ့ ပညာရေးစနစ် နိုင်ငံက သယံဇာတတွေ ပေါပါရဲ့နဲ့ မီးခြစ်ဆံတောင် မထုတ်နိုင် မထုတ်တတ်တဲ့ ပညာရေး တီထွှင်ဖန်တီးမှုမရှိ
စိတ်ကူးတွေအသတ်ခံရတဲ့ပညာရေး အမှတ်ကောင်းဖို့ အလွတ်ကျက် ဆေးမှတ်မှီမှ လူရာဝင်အထင်ကြီးခံရတဲ့ပညာရေး ဝိဇ္ဇာ သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်ဆို လူတုံးလူအ သာ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ ပညာရေး အဆင့်အတန်းခွဲတဲ့ ပညာရေ
း လေးစားမှုမဲ့တဲ့ ပညာရေး ဘယ်ဘာသာရပ်နဲ့ ကျောင်းပြီးပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့ ပညာရေး အချိန်များစွာ ငွေကုန်ကြေးကြခံ သင်ခဲ့ရပေမဲ့ အလုပ်မဲ့အကိုင်မဲ့များလွန်းတဲ့ ပညာရေး အစရှိသဖြင့် တန်ဖိုးမဲ့ပညာရေးကို တန်ရာတန်ကြေးများများပေးပြီး ရခဲ့တဲ့ပညာရေးမှာ ကျမတို့ မျိုးဆက်တွေဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်
ခု ဒီမိုကရေစီဖားတပိုင်းငါးတပိုင်းဘဝမှာ ရလိုက်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပညာရေး ကျမသမီးလေး kg ခေါ် ပညာရေးစနစ်သစ်မှာ သိပ်ကို ပျော်​ေနရှာတာ
ခေတ်ကလေးတွေ ဉာဏ်လေးကသွက် ပုံစံမချဘဲ သူတို့လိုရာပုံစံကျဖို့ပဲ မျှော်နေကြတဲ့မိဘတွေ ကျောင်းဖွင့်တိုင်းကျောင်းအပ်ခ တကျပ်မှ မပေးရ ဖတ်စာအုပ်အစုံ အခမဲ့ကျောင်းဝတ်စုံလေးတစုံတောင် ရပါသေး အို ကျမတို့ငယ်ငယ်ဘဝလို ကျောင်းအပ်ခမတတ်နိုင်လို့ ကျောင်းမနေရတဲ့ အဖြစ်တွေ ဖတ်စာအုပ်မဝယ်နိုင်လို့ ဘေးကသူငယ်ချင်း မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ ကပ်ကြည့်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ ဝေးပြီပေါ့လေ စိတ်ချမ်းသာရုံရှိပါသေး
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ကျောင်းတွေ နားရ မမှုမိပါဘူး အချိန်တန် ကျောင်းတက်ချိန်တွေက ကြောင့်ကြစရာမှမရှိဘဲလေ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်း ကျောင်းနေရစေရေးမူတွေ ချမှတ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချမိစေတဲ့ နည်းစနစ်တွေ ဖေါ်ဆောင်ဆဲ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေပြီမို့လား
ခုရော ခုက အဓမ္မသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်သူတို့ ကြီးစိုး အဓမ္မကို ထောက်ခံ အဓမ္မ ကိုယ့်ကိုယ် ကြည့်တတ်တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေ သင်မဲ့ ကျောင်းခန်းထဲ ကျမတို့မိဘတွေ ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးကို ကျောင်းပို့ကြမလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းပါရှင်
ကျမတော့ မပို့ရဲပါဘူး မလုံခြုံမယုံကြည်မိပါဘူး တစိမ့်စိမ့်ရိုက်သွင်းမဲ့ မိစ္ဆာဝါဒတွေ ဘာမှ သုံးစားမရတဲ့ ကျွန်ပညာရေး ကျမ သိပ်သိပ် ကြောက်မိပါတယ်ရှင် ဒီလို အဆင်အပြင် ဒီလို ကျောင်းပညာရေး သင်ပေးမဲ့အစား ဘာပညာမှ မတတ်တာကပဲ ကောင်းပါသေးတော့ရှင်
ကျမကတော့ အဆုံးထိ ပြည်သူ့အစိုးရ ပြည်သူ့ကျောင်းဖွင့်မှသာ ကျမကလေးတွေကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ကျောင်းပြန်ထားမယ် ကျမတို့ခေတ် ကျမတို့စနစ်ဟောင်းတွေကြား ကျမတို့ မျိုးဆက်တွေပြန်မရောက်စေလိုဘူး
ဒါကြောင့် ပြည်သူ့ကျောင်းစစ်စစ်ဖွင့်မှသာ အနာဂတ်ကလေးတွေ အားလုံး ကြောင့်ကြ ကင်းမဲ့စွာ လွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွှင်စွာ နှစ်လိုစွာ ကြည်ကြည်နူးနူး ကျောင်းတက်ပြီး ပညာသင်ကြားနိုင်ကြပါစေလို့ ကျမရင်ထဲက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆုမွန်တောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
Previous post ယခုလို အခြေအနေ တွေ မှာ အခြေခံ လူတန်းစားတွေအတွက် အစားအသောက် တွေ ကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ…..
Next post အင်း စိ န် ထောင် က ပြန် လွတ်လာ တဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်း ဆောင် ပြောပြသော အင်း စိန် ထောင် မှာ ဖမ်း ထား တဲ့ ထင်ရှား သူတွေ ရဲ့ အခြေအနေများ